Zavatra 11 izay azo heverina ho fisolokiana amin'ny fifandraisana - Fifandraisana
Somary misavoritaka kely ve ianao hoe aiza ny filaharana raha ny resaka fitaka?
Na eo am-pifandraisana ianao izao na manantena ny hanana fifandraisana amin'ny ho avy dia mila mahazo antoka ianao fa voataona mafy hatrany io andalana io raha vao azo atao…
… Ho tombontsoan'ny rehetra voarohirohy.
Ny fahazavana amin'ny zavatra heverina fa famitahana sy izay tsy avy amin'ny fialan-tsasatra dia afaka mamonjy ratram-po tanteraka.
Raha manambaka ny sakaizanao ianao, na ny mifamadika amin'izany, dia mety hiteraka fahavoazana sy fanaintainana mahatsiravina, na eo aminao na amin'ny olon-dehibe hafa eo amin'ny fiainanao.
Raha efa voafitaka ianao dia ho fantatrao tsara fotsiny fa mety handrava azy, ary, ho an'ny olona sasany, mety ho sarotra tokoa izany mianatra mitoky indray amin'ny ho avy .
Tsy misy fifandraisana roa hitovy ary tsy hitsara izay lesoka nety ho nataonao taloha aho…
Saingy, raha namitaka olon-tianao ianao dia avy eo, raha manao ny marina amin'ny tenanao ianao, dia mety mbola hanelingelina anao lalina hatrany ny fahatsapanao izany.
Amin'ny ankapobeny, rehefa mivadika ny fifampitokisana dia tsy misy olona tafavoaka izany tsara.
Ny fahatokisana no fanjakan'ny fifandraisan'olombelona tanteraka, tantaram-pitiavana na tsia, na iza na iza manintona anao ary na inona na inona fitsipika apetrakao amin'ilay olona tianao.
Na dia eo amin'ny fifandraisana polyamorous aza, izay matetika dia mety sarotra ho takatry ny sain'ny olona monogamous, dia voasintona foana ny andalana, ary ireo olona voakasik'izany dia hahatsapa ho voadona sy hamadika azy ireo raha tafita ireo andalana ireo.
Saingy, ho an'ny tanjon'ity lahatsoratra ity, dia hodinihintsika izay mety hoheverin'ny 'salanisa' amin'ny fifandraisana tokana amin'ny kolontsaina tandrefana ho mpamitaka.
james parnell lefona harato net
Hiezaka izahay hametraka làlana afovoany, satria misy hatrany ny fomba fijery tafahoatra amin'ny fomba iray na amin'ny lafiny hafa.
Rehefa dinihina tokoa, misy ny olona any izay miampanga ny sakaizany ho namitaka azy ireo fotsiny noho ny fijerena ankizilahy na zazavavy hafa, ary ny olona any izay tsy hikapoka eyelid raha mifanoroka olon-kafa ny olon-tiany.
Ho tombontsoan'ny fanomezana torolàlana mahasoa ho an'ireo izay tsy mahazo antoka ny halaviran'ny lavitra sy izay tena atao hoe fisolokiana, hanoratako tsipika eto amin'ny fasika eto aho.
Tsarovy fotsiny fa na dia mety tsy azonao atao aza ny manisy marika ny zavatra sasany ho fitaka tanteraka, dia azo heverina ho famadihana fahatokisana izany, izay mety ho sarotra amin'ny namanao ny hamela azy.
Mazava ho azy, ny mpivady rehetra dia mila mamantatra ho an'ny tenany aloha eo amin'ny fifandraisan'izy ireo dia okay, ary inona tsy .
Zavatra 6 izay tsy ilaina ilaina amin'ny famitahana
Ireo zavatra voatanisa amin'ity fizarana ity dia manana sosona maro amin'izy ireo. Amin'ny tranga maro dia tsy ny tena ataonao no atao, fa izay fikasanao anaty.
Ny olona sasany dia mety hihevitra ireo zavatra ireo ho toy ny fitaka, ny hafa kosa mety tsy hieritreritra. Anjaranao sy ny namanao no manapa-kevitra ny amin'izay tsapanao momba azy ireo.
Ny filalaovana fitia tsy manan-tsiny kely dia tsy tokony ho raharaha lehibe, ary maro amintsika no milalao olon-droa amin'ny firaisana ara-nofo mahasarika antsika tsy tonga saina…
… Na dia tsy manintona ilay olona resahina aza izahay.
Amin'izay dia afaka mifanalavitra amin'ireo mpikambana amin'ny firaisana tsy mahasarika antsika mihitsy isika, noho ny karazan-javatra rehetra.
Na dia ny filalaovana tsotra fotsiny aza tsy misy antony manosika dia tsy azo faritana hoe fitaka, misy toe-javatra sasany izay ananan'ny olona iray manan-jo hikorontana na ho tezitra amin'ny fihetsiky ny sakaizany.
Raha minia milalao olona tianao ianao (tsy mpiara-miasa aminao izany) amin'ny fiezahana hahatonga azy ireo hanana firaisana ara-nofo na firaisana ara-pitiavana aminao, dia tsy famantarana tsara izany.
Tsy maninona na mikasa ny handalo amin'ny zavatra rehetra ianao na tsia.
Toy izany koa, raha mahita ny tenanao milalao olon-kafa fantatrao fa liana aminao ianao mba hamporisihana azy ireo, na tianao izy ireo na tsia, dia mamadika ny fahatokisan'ny namanao ianao.
Na dia azontsika atao aza ny mitsara an-tsakany sy an-davany ireo toe-javatra ireo indraindray dia hampahafantatra anao amin'ny ankapobeny ny feon'ny fieritreretanao raha toa ianao ka nanao fihetsika tsy tokony hatao.
2. Fandefasana hafatra an-tsoratra
Ity sokajy ity dia afaka mandrakotra ny karazan-ota rehetra.
Mazava ho azy fa ao anatin'ny zonao ny mandefa SMS an'izay tianao…
… Ary raha hitanao fa ny vadinao dia mangataka fangatahana tsy mitombina mba hampijanonanao ny fifandraisanao amin'ny namanao na ny sakaizanao taloha izay namana, dia mila mandinika tsara ianao raha mifehy loatra , ary raha misy ny fifandraisana ara-pahasalamana .
Azo antoka fa tsy tokony handalo ny telefaoninao izy ireo na hitaky ny hamakianao ireo hafatrao.
Izay no atao hoe fahatokisana.
Na izany aza, raha manana hafatra amin'ny findainao ianao izay tsy tianao ho hitan'ny mpiara-miasa aminao, na hafatra izay tianao mahatsiaro tena ho meloka momba, avy eo ianao mifindra any amin'ny faritany mampidi-doza.
Toy ny tranga filalaovana fitia, na manao ahoana na manao ahoana fanandramanao tsy miraharaha ireo fihetseham-po mihoampampana, dia ho fantatrao hatrany hatrany hatrany raha famadihana fahatokisana ny hoe iza sy inona no andefasanao hafatra.
3. Manao ny zavatra manokana
Ny mpivady tsirairay dia samy manana ny fombafombany manokana sy ny hetsika manokana ataon'izy ireo izay miaraka ihany, izy roa ihany.
Noho izany, misy zavatra sasantsasany izay tsy ampifandraisan'ny olona mihitsy amin'ny famitahana fa ho an'ny hafa dia mety ho famadihana farany.
Na dia olona iray ao anatin'ny fifandraisana polyamorous aza, ohatra, dia mety ho tsara amin'ny oroka amam-panambadiany na matory amina olon-kafa, nefa mety hahatsapa ho voafitaka izy raha mijery ny fizarana manaraka amin'ny andiany fahita amin'ny TV miaraka amin'ny olon-kafa ny olon-tiany.
Raha misy zavatra ataonareo roa tonta foana amin'ny fomba fanamafisana orina ny fifamatorana, dia mitandrema amin'ny fanaovana izany amin'ny olon-kafa.
Heveriko fa afaka manaiky daholo isika fa ny dihy tsy manan-tsiny miaraka amin'ny olon-kafa dia tsy mamitaka.
Raha tia dihy salsa ny olon-tianao, ohatra, dia tsy maintsy zatra ny zava-misy fa matetika dia mandihy amin'ny olona maro izy ireo.
Fa na dia ao anaty dihy aza dia misy tsipika.
Ny olona sasany dia mahatsiravina amin'ny fitsarany izany, fa raha misy mangataka anao handihy, dia azonao atao amin'ny ankapobeny ny mamantatra raha tsy manan-tsiny ny fikasan'izy ireo na raha manana antony manosika ivelany izy ireo.
Ny fitokisana ny didim-pitsaranao rehetra, ary koa ny fahafantarana fa mino anao ny namanao, ary tsy ho tezitra raha mieritreritra ianao fa tsy manan-tsiny izany nefa tonga saina tampoka fa manana hevitra hafa ao an-tsainao ilay namanao mandihy.
Ny fitotoana, etsy ankilany, dia famantarana miharihary fa mety hisy eo amin'ny karatra ny firaisana.
Mety handihiza somary mihantsy ianao rehefa mikorontana amin'ny namanao fotsiny ho fihomehezana, fa raha misy singa ara-nofo amin'izany, dia azo iadiana hevitra izany ho endrika fisolokiana malefaka.
5. Mitazona tànana
Mpivady maro no mankafy mifampikambana amin'ny rantsan-tànany ary mifampikasoka tanana amin'ny mariky ny fiarahana…
..ary satria mahatsapa fa mahafinaritra ny manana fifandraisana ara-batana amin'ny vadinao.
Saingy ny olona sasany dia te-hifandray tànana amin'ny hafa koa, ary tsy mila manana dikany manokana amin'izany.
Mpinamana Platonika amin'ny lahy sy ny vavy rehetra dia afaka mihazona tanana tsy amin'antony. Mety ho noho ny antony azo ampiharina aza toy ny fahatsapana ho voaro rehefa mandeha alina.
Mila miverina amin'ny fanontaniana momba ny fikasana indray ianao sy ny zavatra tsapanao rehefa mifampiraharaha tanana amin'ny olona iray ianao.
Raha manao izany ianao mba hampisehoana fihetseham-po amin'ny tantaram-pitiavana, dia mety tsy hidina ambany loatra amin'ny vadinao izany.
Ny famihina olon-kafa dia tsy manisa fa mamita-tena fotsiny.
Ny famihina dia fihetsika voajanahary ataon'ny olombelona izay manampy antsika hanorina fatorana amin'ireo olona manan-danja amintsika.
Amin'ny ambaratonga ifotony indrindra dia zavatra tokony hanafahana anao amin'ny olona tianao izy.
Na izany aza, raha mitohy lava kokoa noho ny ilaina ny famihinana ary miara-misintona famihina mafy ianao izay maneho fisarihana ara-batana akaiky kokoa, dia azo sokajiana kely ho toy ny karazana hosoka.
Zavatra 5 izay azo antoka fa mendrika ho fisolokiana
Ankehitriny, andeha hitodika any amin'ny saintsika ireo zavatra izay mety ho azo antsoina hoe fisolokiana amin'ny fifandraisana tokana.
Ny tendrony amin'ny molotrao miaraka amin'ny vadinao tsara indrindra dia tsy manisa, fa heveriko fa ny ankamaroan'ny olona ao anatin'ny fifandraisana tokana irery dia hanaiky fa ny oroka mafana amin'ny olon-kafa dia mendrika ho mpamitaka.
Tsy voatery mila tsipelina ny fiafaran'ny fifandraisanareo, fa zavatra ilainao ho marin-toetra tanteraka amin'ny namanao izany.
Ianao koa dia mila manao ny marina amin'ny tenanao momba ny antony nitrangan'ny oroka, ary raha tena sambatra ianao amin'ny fifandraisanao.
2. Fanohinana ara-nofo
Raha manana fifandraisana tokana ianao, dia tsy zavatra tokony hataonao ny mikasika olon-kafa amin'ny faritra akaiky.
Tsy misy fomba roa amin'izany.
Ny fandefasana hafatra dia zavatra iray, fa ny sexting dia tena miampita ilay izy.
Na dia tsy mbola nanao firaisana ara-nofo tamin'ilay olona hafa aza ianao, ny fandefasana hafatra ara-pananahana dia famadihana ny fitokisana napetraky ny vadinao taminao.
Izy io dia mampiseho endrika fisolokiana mampihetsi-po izay nizaranao traikefa akaiky tamin'ny olon-kafa ankoatry ny vadinao.
Tahaka ny amin'ny sexting, firaisana ara-nofo an-telefaona amin'ny olon-kafa dia tsy azo ekena raha eo amin'ny fifandraisana tokana.
5. Firaisana ara-nofo
Tsy maninona na indray mandeha aza no nitrangan'izany.
Tsy maninona na mamo ianao.
Tsy maninona na tsy nisy dikany taminao izany.
Raha nanao firaisana tamin'ny olon-kafa ianao rehefa natoky ny mpiara-miasa aminao fa mifanaiky ianao, dia namitaka azy ireo ianao, ary mila manaiky azy.
Ny fomba tsara hamantarana hoe aiza ho aiza ny fifandraisanareo dia ny fandinihana izay ho tsapanao raha toa ka nanao zavatra taminao ny vadinao.
ll ianao tsy hahita na iza na iza toa ahy
Raha mahatsapa ianao fa voafitaka raha manana karazana fifandraisana amin'ny olon-kafa izy ireo, dia tokony tsy hanao izany koa ianao.
Ny fenitra avo roa heny dia tsy mety raha resaka fifandraisana vita.
Zava-dehibe ny fihetsem-po.
Araka ny efa noresahintsika, ny fisolokiana dia mety hitranga amin'ny endrika roa.
Misy ny fitaka ara-batana, izay miharihary ary mazava kokoa ny fanapahana…
… Ary avy eo misy ny fitaka ara-pientanam-po, izay mety ho sarotra kokoa ny mamantatra azy.
Raha ny fihetsem-ponao no resahina, ara-dalàna ny milaza fa raha manao zavatra amin'ny olon-kafa ankoatry ny vadinao ianao ary mahatsapa fifandraisana ara-nofo na ara-pitiavana amin'izy ireo dia tokony ho mailo ianao.
Zavatra iray ny manintona olona iray hafa raha ao fifandraisana manolo-tena , fa hafa ny mihetsika arak'io fisarihana io.
Raha toa ianao ka manao zavatra mifototra amin'ny fahatsapanao fa tsy ho nataonao raha tsy nisy ireo fahatsapana ireo dia manakaiky ianao na miampita ny làlan'ny fitaka ara-pientanam-po.
Mety tafiditra ao anatin'izany ny zavatra toy ny fividianana fanomezana manokana fahaizana manokana ho an'ny olona iray, ny fahitana ity olona ity amin'ny fandaniana amin'ny fahitana ny sakaizanao, ary ny fieritreretana an'io olona io aza rehefa manao fitiavana ny sakaizanao.
Inona no tokony hataonao raha efa namitaka ianao?
Raha tsapanao fa niampita tsipika ianao, dia aza mikoropaka.
Ny lakile izao dia ny fahitsiana tanteraka.
Mila mamantatra ianao raha te hijanona amin'ny fiarahanareo, ary raha manao izany ianareo dia tonga ny fotoana hibabohana.
misaraka amin'ny olona iray iarahanao miasa
Mila manao ny marina sy mifona ianao, ary ekeo ny andraikitrao tamin'izay nataonao hizaha raha afaka mahita làlana mandroso ianareo roa.
Ilaina ny fifandraisana, ary ny fanaovana ny marina ny politika tsara indrindra tamin'ny andro voalohany.
Fantatro fa clichés ireo, saingy clichés izy ireo noho ny antony iray, ary izany antony izany dia manana fahamarinana marobe amin'izy ireo.
Samy manana ny heviny momba ny atao hoe fitaka ny olona tsirairay.
Midika izany fa ny mpivady tsirairay dia mila miresaka iray izay manazava tsara hoe aiza ny andalana amin'ny tranga manokana misy anao…
… Ary tokony hitranga izany alohan'ny hahatonga ny raharaha ho matotra.
Aza manao vinavina fotsiny, fa tsipiho ny zavatra.
Na dia mety ho resaka mahasosotra kely aza izany, dia hialana amin'ny tsy fifankahazoan-kevitra sy ny faritra volondavenona mety hisy, amin'ny indray andro, ny famoahana ny fifandraisanareo.
iza no tadiavinao ho tonga
ahoana ny fijanonana mitady fitiavana
toerana mahafinaritra aleha rehefa mankaleo
mozika saoka mamy shawn michaels